သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: အရှုံးသမား ဘီလီ
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 3:21 PM
အဲဒီ့ကားလေးက ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေအတွက် စိတ်ကူးယဉ်ချင်စရာ..
လူကြီးပိုင်းတွေအတွက်တော့ ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့စရာပေါ့ မလေးရယ်...
ကျွန်တော်တော့ အဲလိုမျိုးအချစ်လေးကို ရဖူးချင်တယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်မိတယ်.
ရများရဖူးသလား၊ ရမလို့ တန်းလန်းပဲ ဖြစ်နေမလားလို့လည်း စဉ်းစားချင့်ချိန်မိတယ်.
ဒီလိုအချစ်မျိုး ငါရဖူးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်း အသက် (၆၀) ပြည့်မွေးနေ့မှာ ပြန်ပြောင်းအောက်မေ့ချင်တယ်..
ဟိုတလောကတောင် ရထားရှေ့မှာ လက်နှစ်ဖက်ဆန့်တန်ုးပြီး စိတ်ကူးယဉ်မိသေးတယ်. ကံကောင်းလို့ ရထားမတိုက်တာ. (တစ်ခြား LANE မှာ သွားရပ်နေမိလို့လေ..)
(ဟုတ်ပါဘူး.. ကိုရန်) :)
အစ်မရေ အဲဒီရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီးကတည်းက သင်္ဘောစီးရမှာကြောက်သွားတယ်..။ ကြည့်ရင်းနဲ့တောင် အသက်ရှူကျပ်တယ်..။ ကြိုက်တာဆိုလို့ ဇာတ်ဝင်တေးပဲရှိတယ်...။
ဒီဘက်က ဘလော့ဂ်လေးမှာ ကွန့်မင့် လာလာရေးသော မောင်လေးဖြိုးနှင့် ရထားရှေ့တွင် လက်ဆန့်ပြီး ထူးထူးဆန်းဆန်း စိတ်ကူးယဉ်တတ်သော ကိုရန်တို့အား ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။